Posted by P.Ti at Monday, June 15, 2009
ကိုပီတီရေ ဒေသစွဲလေးတွေကျနော်တို့ မြန်မာတွေမှာ ပိုကြီးမားသလိုပဲဗျ။ အားကစားပွဲတွေ ပြိုင်ပွဲတွေ စသည်စသည်တို့မှာကိုယ့်ဒေသကိုနိုင်ချင်တယ်။ ကိုယ့်ဒေသကပိုသာချင်တယ်။ အစုံပေါ့ဗျာ။ အစ်ကိုရေ ညောင်ဦးသားဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူစရာနော်။ ဒေသခံမဟုတ်လေကျနော်တို့တွေ ချစ်တဲ့ ပုဂံမြေနဲ့ထိစပ်နေတာကိုး။
ပုဂံမြေမှာ တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက်တဲ့ ညောင်ဦးသား ကိုပီတိရေ..
ဒီမိုကရေစီ ရရင် ပုဂံကိုလဲ ချန်မထားလို့ ရတော့ အတူတူ ဖြစ်မှာပါ တဲ့လား။ တောက်ပြောင် ရဲရင့်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့သွေးတွေ ကြဲကုန်ပြီလားမသိ။ ရာဇ၀င် မရိုင်းတဲ့ ပုဂံဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိတယ်။
မွေးမေလေ့! ။ ကောင်းရော။ ဘာမှ မပြောတတ်တော့ကြောင်း။
ပုဂံသိပ်ချစ်တယ်။ သိပ်ပျော်တယ်။ ပြည်မှာ ကျောင်းတက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်ခါ။ ချစ်ချစ်နဲ့တစ်ခါ။ အိမ်ထောင်ကြပြီးတော့ မိဘတွေနဲ့နှစ်ခါ။ ခဏခဏရောက်တယ်။ ရောက်တိုင်း ပျော်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ခွင့်ပြန်ရင် ထပ်သွားဦးမယ်။
ကျမက ငါ့သရောက်မှာ မိဘတာဝန်ကျလို့နေဘူးတယ် ၈၇-၈၉ ပေါ့။ပြန်ချင်လိုက်တာနော်။
ဒေသစွဲကြီးဆို ငယ်ငယ်က တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဘောလုံးပွဲတွေကို သတိရတယ်... ဒီလိုပဲ ရောက်တတ်ရာရာ ပြောနေကြတာပဲ မဟုတ်လား...
အမချိုသင်းရေ ခေတ်သစ်ပုဂံကတော့ သွေးတွေရောလို့ပဲလားမသိ စီးပွားရေးပဲဆန်တော့တယ်လေ...
life and live ဆိုတာ profile မှာ ကြည့်တာ ထနောင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ အဲလိုလူတွေများနေလေ အချိန်ကြာလေပေါ့။
ကျွန်တော်လည်း ပုဂံကို ချစ်တယ်။ ဟိုမှာနေကျတဲ့လူတွေအားလုံး ချစ်ကြတယ်။ ၇၅ ခုနှစ် ငလျင်လှုပ်တုန်းက ဘုရားတွေပျက်လို့ တမြို့ ငိုလိုက်ကြတာလို့ ပြောသံကြားဖူးတယ်။
အခုလည်း ဘုရားတွေအဖျက်ခံနေရတာ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲမှာ ငိုနေမိတယ်။
အေး... င ထဲ သ ရောက်ထဲ ရွာပေါ့။ ငါ့သရောက် ထဲက ဆည်ရွာကိုတော့ ရောက်ဖူးတယ်။ လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ။
အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ကြည့်တတ်ရင်တော့နေရာတွေဟာ နီးနီးလေးတွေပါဘဲ။ ဥပမာ- Google Earth မှာ ကြည့်လေ။ :-)
ကိုပီတိရေ… ကျွန်မကတော့ ညောင်ဦးကိုလဲ သံယောဇဉ်ကြီးတယ်… ပုဂံကိုလဲ သံယောဇဉ်ကြီးတယ်… အညာပြန်ရင် မသွားရ မနေနိုင်လောက်အောင်ပါ… ညောင်ဦးသားဆိုလို့ကျောင်းမှာတုန်းက ညောင်ဦးသားကျွန်မသူငယ်ချင်းတယောက်ကို ကျွန်မnickname ပေးခဲ့တာ သတိရမိတယ်… ပုန်းရည်ကြီးတဲ့… သူကကဗျာအရေးသိပ်တော်တာ…
အဲလိုကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ ထင်မထားခဲ့ဘူးလေ... ပြောပြမှ သိရတာမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဟစ်တလာခေတ် ဂျာမဏီပြည်သူတွေကလဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ပြင်းပြလှပါတယ်လို့ ကျွေးကျော်ခဲ့တာလေ...
လူမျိုးစွဲ.. ဒေသစွ.. ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ... ဘယ်အစွဲမှ မကောင်းပါဘူး...
သြော- ၄ မိုင်ထဲ ကွာတာများ..မခွဲခြားပါနဲ့လေ..ပုဂံသားက..ပုဂံသားပါပဲ.. ကျန်စစ်သား တောခိုတော့..တွေ့တဲ့ မထေရ်ကြီးသမီး အိမ်နားကလား..း)
ပုဂံသားတွေက..လှတောသား နဲ့ အမျိုးနီးကြတယ်ထင်ပါ့.. ပြုံးလိုက်ရတာ..အမြင်တောင်မကပ်နိုင်ဘူး.
ဝင်းမင်းဦး ( ကျောက်ဆည် ) said...
ပုဂံ ကတော့ ကျွန်တော်တန်ဖိုးအထားရဆုံး နေရာတစ်ခုပါ ...ပုဂံသားမဟုတ်ပေမယ့် ပုဂံ ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ ပုဂံသူ ပုဂံသားတွေထက်မရော့ပါဘူး ...ပုဂံ ကို လေးခေါက်ရောက်ဖူးပေမယ့် ထပ်တလဲလဲ လာ ချင်နေမိတာ ပုဂံဒေသ ကိုတန်ဖိုးထားလွန်းလို.ပါဗျာ